सर्वोच्चमा डा. केसीको प्रश्नः एसएलसी नगरेका कसरी प्रधानन्यायाधीश भए ?
अन्नपूर्ण मंगलवार, पुस २५, २०७४ 16912 पटक पढिएको
केसीले प्रन्या पराजुलीले एसएलसी पास गरेको नगरेको कुरामा पनि विवाद रहेको कुरा बयानमा उल्लेख गरेका छन् । ‘पराजुलीले एसएलसी पास गरे नगरेकोबारे विगतमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट भएको आदेशको मिसिल पनि हेर्न पाऊँ । पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र जाँची पाऊँ', केसीले भनेका छन्, 'न्यायाधीश हुन प्रमाणपत्रै नभएको व्यक्ति कसरी प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन् ? के यो राज्य र अदालत जस्तो संस्थालाई गुमराहमा राख्ने अपराधिक कार्य होइन ?'